Atletico Madrid Oo Ku Hungowday Sevilla Iyo Wararkii Kooxaha Spain Oo Dhan
HomeSpainAtletico Madrid Oo Ku Hungowday Sevilla Iyo Wararkii Kooxaha Spain Oo Dhan
Atletico Madrid ayaa ku hungowday damaceeda guusha ee ciyaar dhex martay Sevilla Axaddii taas oo ay rajaynaysay in ay guul ka gaadho si ay u sii noolaato rajadeeda ah in ay difaacato horyaalka La Liga ee ay sannadkii hore ku guuleystay.
Kooxda tababare Diego Simeone oo halgan ugu jirta in ay soo qabato labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona oo sallaanka sare isku haysta ayaa u baahnayd in ay guuleysato kadib markii ay Arbacadii guul darro kala kulantay tartanka Champions League oo ay 1-0 kaga adkaatay Bayern Leverkusen .
Simeone ayaa kulanka Sevilla isbeddel ku sameeyey qaab ciyaareedka kooxdiisa, isaga oo awoodda saaray khadka dhexe oo uu ka ciyaarsiiyey shan laacib halka weerarkana uu ku kaliyeystay Griezmann.
Fernando Torres ayaa beddel ku soo galay qaybtii dambe ee ciyaarta, waxaanu muujiyey dardar iyo weerar uu ku qaaday goolka Sevilla halkaas oo uu ku sigtay in uu goolal ka dhaliyo hase yeeshee goolhayaha Sevilla, Sergio Rico ayaa uga dhaartay in ay kubbado shabaqiisa galaan.
Atletico waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaanay leedahay 54 dhibcood, waxa ay shan dhibcood ka hoosaysaa Barcelona oo booska labaad fadhida iyadoo Sabtidii 3-1 ku khaarajisay Granada oo ku soo booqatay Camp Nou. Barcelona waxa ay iyaduna laba dhibcood ka hoosaysaa Real Madrid oo hoggaanka haysa haseyeeshee barbar dhac 1-1 la gashay Villarreal.
Valencia ayaa sii adkaysatay booskeeda afraad iyo in ay murugga ku sii badiso oo ay eryato Atletico Madrid, waxaanay 2-0 ku khaarajisay Real Sociedad iyadoo labada goolna uu si isdaba yaaac ah ugu dhaliyey Pablo Piatti. Waxa ay Valencia ku dagaalamaysaa in ay boos ka hesho Champions League xili-ciyaareedka dambe, sidaa daraadeedna ay ugu yaraan ku dhamaysato booska afraad.
Valencia oo uu dhawaan iibsaday maal-qabeenka Billionnaireka ah ee reer Singapore, Peter Lim waxa ay leedahay rajo fiican, iyadoo lala hareero taagan yahay lacago badan oo ay ku iibsato ciyaartooyo iyo sidoo kale dibu-dhis ballaadhan oo lagu samayn doono.
Sociedad oo uu tababare u yahay macallinkii hore ee Manchester United, David Moyes waxa ay fadhidaa kaalinta 12aad iyadoo leh 27 dhibcood, waxaanay shan dhibcood oo kaliya ka sarraysaa booska dib-ugu-noqoshada heerka labaad.
Atletico Bilbao ayaa kor ugu soo ruqaansatay kaalinta 10aad kadib markii ay 1-0 kaga dul-tallaabsatay Eibar kulankii Basque derby, waxaana goolka madiga ah ee guusha horseeday daqiiqaddii 36aad madaxa ugu dhaliyey Carlos Gurpegi.
Pele: Waxaan Ku Dhowaaday Inaan U Ciyaaro Real Madrid
Xulka 20 Jirka England Oo U Gudbay Finalka Koobka Adduunka Da’yarta Kaddib Cashar Ay U Dhigeen Talyaaniga